Karakarain’ny Sefo Mpahandro Hanina Omena Maimaim-Poana Ho An’Ireo Tsy Manan-Kohanina Ny Ambim-Bavan’ny Lalao Olaimpika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2016 15:45 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Italiano, Español, 日本語, English
Ny ekipan'ny sefo RefettoRio eo am-piasana tao Rio. Loharanontsary: Angelo DalBo/Refettorio Gastromotiva
Ity lahatsoratra ity dia navoakan'i David Leveille voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 18 Aogositra 2016. Navoaka eto indray izy ity noho ny fifanarahana fifampizaram-botoaty.
Nihinana nihoatra noho ny hanina manome hery sy zava-pisotro misy proteinina betsaka ny atleta olaimpika. Ataovy sary an-tsaina fotsiny ny sakafo 250 taonina nokarakaraina hamahanana ireo atleta miisa 11.000 mifaninana tamin'ny lalaon'i Rio.
Tahaka ny fikarakarana atao amin'ny lanonan-dehibe sy goavana hafa, ilain'ny farimbona amin'ny fanomezana sakafo ihany koa ny fampitaovana, ny fikarakarana ary ny fahaizana manombana ny hamaroana sy ny habetsaky ny sakafo atao eo ampelatanana hanaovana izany ho sakafo mahavoky.
Tsy maintsy misy noho izany ny mihoatra, mety ho amin'ny kesika ny ambin'ny voankazo sy ny legioma, ny ovy sy ny vary.
Ankehitriny, misy vondron-tsefo (mpikarakara sakafo) iraisampirenena sady mpikatroka miady amin'ny hanoanana miantso ny tenan'izy ireo ho RefettoRio Gastromotiva (refettorio dia teny italiana midika hoe efitra lehibe fihinanan-kanina) miezaka ny manavotra ireo sakafo olaimpika mba tsy ho verivery maina. Sefo anankiroa, ny Italiana Massimo Bottura sy ny Breziliana David Hertz, no mitarika ny ezaka hamadika ny ambim-bava nalefa ho an'ny Vohitra Olaimpika ho sakafo ho an'ny tsy manan-kohanina. Nilaza ry zareo fa ny tanjona dia ny “hanolotra sakafo sy fahamendrehana ho an'ny olona ao anatin'ny faharefoana ara-piarahamonina.”
Hoditr'akondro noevohina no nasolo ny tavinkena tao amin'ny lovian'ny RefettoRio hanaovana paty carbonara. Loharanontsary: Refettorio Gastromotiva
Tao anatin'izay herinandro vitsivitsy izay, nahatolotra sakafo ho an'olona hatramin'ny 108 avy amin'ny ambim-bava amin'ny alina nomen'ny orinasa misahana ny famahanana ny Vohitra Olaimpika ireo sefo RefettoRio. Tsy ambin-kanina am-bilia ireo na latsaka teny amin'ny latabatra (sy latsaka amin'ny tany).
“Ny iasan'ny RefettoRio dia amin'ireo fangaro izay efa ho atsipy ihany… tahaka ireo voankazo sy legioma ratsy endrika, na yogurt efa ho ariana ao anatin'ny roa andro raha tsy misy mividy,” hoy ny sefo Hertz.
Ny efitra fihinanana dia natsangana tao amin'ny manodidina an'i Lapa akaikin'ny Vohitra Olaimpika.
“Tsy natao hanana endrika restaurant mahazatra mihitsy io ,” hoy i Alexandra Forbes, Breziliana manoratra momba ny sakafo izay nandray anjara tamin'ny fananganana ny RefettoRio. “Hafa dia hafa manko ny sokajin'ny mpanjifa. Ho an'ny maro amin'izy ireo dia sambany no hianoka izany sakafo feno [in-telo miditra] karakarain'ny mpahay nahandro, izay mafilotra izany ry zareo. Mahatsiaro ho manana tombondahiny manokana ry zareo amin'izany.” Mpisakafo iray niteny tamin'ny Times fa izany no sakafo tsara indrindra nohaniny tao anatin'ny 40 taona.
Ireo fikambanana eo amin'ny manodidina izay nikarakara ireo fadiranovana ireo no nanatsonga ireo olona avy amin'ny ambaratongam-piarahamonina rehetra ao Brezila. Mety ho tafiditra ao ny olona tsy manan-trano izay voatery mikaroka sakafo eny amin'ny fanariam-pako, ireo ankizy mirangorango sakafo fatratra, na ireo reny mijaly an-tokantrano.
“Tsy mahazatra azy ireo no karakaraina sy hajaina tahaka izao,” hoy ny Forbes, izay nanampy fa “nankafy tokoa ny sakafo ry zareo hany ka mitehaka sy mandihy noho ny hafaliana indraindray.”
Miova isan'andro ny mpahay nahandro mitarika ny fikarakarana. ”Ohatra, indray mandeha ny sefo Massimo Bottura nanao paty, carbonara izay matetika atao amin'ny pancetta [tratran-kisoa nohamainina] na tavin-kena maina. Kely ny tavin-kena teo ka nampiasa hoditr'akondro efa natsatsika mialoha [natao masaky ny setroka] izy ary nafangarony tamin'ny tavinkena maina izany, ary dia tahaka ny tavin-kena maina mihitsy ny tsirony ary natsiro tokoa.”
Mety ho nanahirana ny nanangana sakafo avy amin'ny angona zavatra ilaina hafahafa. Saingy araka ny nolazain'i Forbes hoe ny tanjony hanaovana ny ekipan'ny mpahandro, mpanao mofo ary mpanolotra sakafo ao amin'ny RefettoRio dia ny “hampitsahatra ny fitsaratsara-poana, fitsaratsara-poana atao amin'ny mahantra, fitsaratsara-poana atao amin'ny sahirana [manana olana].”
“Tahaka ny olon-drehetra ihany” koa ireo vehivavy ampijaliana ao an-tokantrano na miafy mafy ivelomana, hoy izy, “ka araka ny eritreritro, dia zava-dehibe ny fahafahana mikarakara azy ireo amim-panajana sy manolotra sakafo lehibe ho azy ireo.
Mandritra izany fotoana izany ny RefettoRio miezaka mandefa hafatra momba ny fanarian-tsakafo fahatany. Tokony ho 30 isanjato amin'ny sakafo vokatra manerana izao tontolo izao no tsy misy mihinana mihitsy satria potika mandritra ny fotoam-pahavokarana na mandritra ny fitaterana azy, na arian'ny mpivarotra sy ny mpanjifa. Nefa olona 800 tapitrisa manerana izao tontolo izao no mandry fotsy ny alina, araka ny tarehimarika navoakan'ny Firenena Mikambana.
“Miteraka fanariantsakafo tsy amin'antony ny lanonana goavana dia goavana tahaka ny Lalao Olaimpika satria maro loatra ny olona fahanana ka sarotra ny maminavina izay ilaina amin'ny zavatra tsirairay ary tsy azo ihodivirana ny fahamaroan'ny ambim-bava. Saingy tsy nisy ny nahasahy nanondro izany olana izany.”
Izay aloha no izy hatramin'izao.
Manam-pikasana ny RefettoRio Gastromotiva ny hanangan-javatra avy amin'izao fahombiazany izao amin'ny alalan'ny fanokafana tolo-tsakafo andoavam-bola. Ny tombombarotra azo avy amin'izany dia natao hanentsenana ny fandaniana amin'ny fanomezana sakafo maimaim-poana ho an'ny tsy manan-kohanina amin'ny alina. Misy ihany koa ny fikasana hanandramana ny RefettoRio any Montreal, Los Angeles ary New York.
Sakafo maimaim-poana hatolotra alina ho an'ny mpihinana miisa 108 ao amin'ny restaurant manokana natsangana manakaiky ny Vohitra Olaimpika. Loharanon-tsary: Refettorio Gastromotiva